एक छाक दालभातको ३०० – Tesro Ankha
एक छाक दालभातको ३००
933 पटक पढिएको
नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको सदरमुकाम कुन हो ? तपाईंहरूलाई थाहा छ ? छैन भने नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको सदरमुकामबारे जानकारी गराउँदै छु ।
७५ जिल्लामा विभाजितमध्ये हुम्ला पनि एक हो । हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट हो । सिमकोटलाई नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको सदरमुकाम भनिन्छ । सिमकोट समुद्र सतहबाट २,९४५ मिटरमा उचाइमा रहेको छ ।
सिमकोटलाई चारैतिर डाँडाकाँडाले घेरेको छ । यहाँ हिउँद (पुस/माघ) मा माइनस १२ र वर्षामा २८ देखि ३० डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुन्छ । उच्च हिमाली हावापानी भएकाले सिमकोटमा पानी कम पर्छ । तर, हिउँदमा भने हिमपहिरो खस्ने गर्छ ।
सदरमुकामवरिपरि बलौटे र ढुङ्गा मिसिएको माटो पाइन्छ । त्यस्तो माटोमा गहुँ, कोदो, जौ, फापर, कागुनो, उवा, चिनो, आलु र सिमी खेती गरिन्छ । सिमकोटमा धान खेती हुँदैन । धान उत्पादन नभए पनि सरकारले स्थानीयलाई खाद्य संस्थानमार्फत चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । तर, हुम्लाका किसानले खेतीकिसानीमा मिहिनेत गरेजस्तो उत्पादन भने हुँदैन । उत्पादित अन्नबालीले स्थानीयलाई तीन महिनासम्म खान पुग्छ । जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय सिमकोटमै छन् । महँगी अत्यधिक रहेको छ । हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज न्यौपानेले भने, ‘कालो चिया प्रतिकप ३० रुपियाँ पर्छ । दालभात प्रतिछाक तीन सय र मासुभात चारदेखि पाँच सयसम्म पर्छ ।’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेका अनुसार अन्य जिल्लाबाट पहिलोपटक हुम्ला आइपुगेका कर्मचारीलाई ‘हाई अल्टिच्युड’ लाग्छ । तिमीहरूमध्ये कसैको घर वा आफन्तको घर सिमकोटमा पर्छ र त्यता जाँदै छौ भने सावधानी अपनाउनुपर्छ । ‘हाई अल्टिच्युड’ लाग्नबाट जोगिने उपायबारे पूर्वजानकारी लिए सजिलो हुन्छ । सिमकोटबाटै तिब्बतको प्रसिद्ध तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर जान सकिन्छ । यहाँबाट पाँच दिन पैदल दूरीमा मानसरोवर रहेको छ ।
हुम्ला अहिलेसम्म सडकको राष्ट्रिय सञ्जालले जोडिएको छैन । यातायातअन्तर्गत हवाई सेवामात्रै रहेको छ । २७ गाउँ विकास समिति रहेको हुम्लावासीका लागि हवाई सेवासमेत भरपर्दो छैन । सिमकोटमा रहेको विमानस्थल त्यत्तिकै जोखिममा छ । जोखिममा रहेका नेपालका विमानस्थलमध्ये सिमकोट तेस्रोमा पर्छ । विमानले विमानस्थलको दक्षिणी क्षेत्र
(बाजुरा, मगु) पट्टिबाट उडान र अवतरण गर्ने गर्छ । अन्य ठाउँबाट नमिल्ने भएकाले दक्षिणी क्षेत्रमा बादल लागे उडान तथा अवतरण अवरुद्ध हुन्छ । यातायात असुविधाले हुम्लावासीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्ने हुम्ला भौगोलिक क्षेत्रको हिसाबले नेपालको दोस्रो ठूलो जिल्ला हो । हुम्लाका अधिकांश भू–भाग बाह्रै महिना हिउँले ढाक्छ । एक सयभन्दा बढी हिमालबाट हिउँ पग्लेर स्थायी स्रोत भएका नदी भएकाले हुम्ला जलस्रोतको धनी जिल्ला मानिन्छ । नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली यही जिल्ला भएर बगेको छ ।
कर्णाली अञ्चलमा पर्ने हुम्लामा बुवाको निधन हुँदा वर्ष दिनसम्म माछा–मासु र आमाको निधन हुँदा वर्ष दिनसम्म दूख नखाने चलन छ । जन्म दिने बुवाआमाप्रति हुम्लावासीको यो चलन प्रशंसनीय छ । संवत् २०१८ सालमा हुम्ला स्वतन्त्र जिल्लाका रूपमा स्थापित भएको हो ।
२०७४ जेष्ठ २८ २२:१४
कोदाली किसानका साथी, अरूभन्दा धेरै माथि
‘हट एन्ड सेक्सी’
हलेसी गुफामा रहेको शिवलिंग ढाक्न सुनको जलहरि
हाइसन्चो हाँसो :
बाख्रा पाल्ने योजनामा हुनुहुन्छ, हो भने जान्नैपर्ने २४ कुरा
पर्यटन प्रवद्र्धनका पक्षपाती : निर्मला गिरी
तेक्वान्दोमा ब्ल्याकबेल्ट नायिका
‘स्मार्ट सिटी’ हाम्रो लक्ष्य : वालिङ नगर प्रमुख खाँण
स्थानीय सरकारसँग सिङ जुधाउँदा नेकपा नेता संकटग्रस्त
खोप ल्याउने पहल थाल्न काँग्रेसको आग्रह
स्थायी कमिटीमा सङ्कट समाधानको सूत्र खोजिँदै
Halesi Tuwachung Municipality-6, Khotang
Email : jemsinghrai@gmail.com
News : 9866049667
Marketing : 9866049667
© 2016 - 2021 tesroankha.com. All rights reserved. सूचना विभाग दर्ता नम्बर ८३३/०७४/७५